2009-08-02 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ပို့စ်​ခေါက်​နည်း​ကို ​ကျွန်​တော်​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ် .
​မ​ပြော​ချင် template ​ကို​တော့ back up ​လုပ်​ထား​ဖို့ ​မ​မေ့​ပါ​နဲ့ .. ​ဒါ​မှ ​ကို​လုပ်​တာ ​မှား​ယွင်း​သွား​ရင် ​အ​ရင် Blog ​ပုံ​စံ​အ​တိုင်း ​ပြန်​ရ​မှာ​ပါ .
(၁) blogspot ​ကို log in ​ဝင်​လိုက်​ပါ ..
(၂) Layout >> Edit HTML ​ကို​သွား​ပါ ..
(၃) </head> ​ကို ​ရှာ​ပါ </head> ​မ​ဆုံး​ခင်​လေး​မှာ ​အောက်​မှာ ​မှင်​အ​နီ​နဲ့ ​ပြ​ထား​တဲ့ script ​ကို ​ကူး​ထည့်​လိုက်​ပါ။
(၄) ​ပြီး​တာ​နဲ့ save ​လုပ်​ပါ​မယ် ..
(၅) layout >> Html ​မှာ Expand widget Templates ​ဆို​တာ​လေး​ကို check ​လုပ်​ထား​ပေး​ပါ။
(၆) Ctrl+F ​ကို ​နှိပ်​ပြီး ​ပေါ်​လာ​တဲ့ search box ​မှာ id='post' ​လို့ ​ထည့်​ရှာ​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း ​ဟုတ်​ရဲ့​လား​ဆို​တာ​ကို ​လိုက်​စစ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​မ​ဟုတ်​ဘူး​ဆို​ရင် ​အောက်​က​အ​တိုင်း ​လိုက်​ပြင်​ပေး​ပါ . ​တူ​ညီ​အောင် ​သေ​ချာ​လိုက်​စစ်​ပြီး ​ပြင်​ပေး​လိုက်​ပါ . ​အဲ့​လို ​မ​လုပ်​ချင်​ရင်​လဲ ​နံ​ပါတ် (၇) ​နည်း​အ​တိုင်း ​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ...
​အ​ပေါ်​က ​စာ​လုံး​အ​နီ​ပြ​ထား​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​မြန်​မာ​လို​လဲ ​အ​စား​ထိုး​လို့​ရ​ပါ​တယ် .
Read More ​နေ​ရာ​မှာ ​ဆက်​လက်​ဖတ်​ရှု့​ရန် (​သို့) ​သင်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ
Thank ​နေ​ရာ​မှာ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် (​သို့) ​သင်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ ​ကို​ပြောင်း​နိုင်​ပါ​တယ် .
(၇) ​အ​ပေါ်​က​လို ​ပြန်​ပြင်​နေ​ရ​မှာ ​ကြောက်​နေ​ရင် ​အောက်​က​တစ်​နည်း​နဲ့ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ ..
<b:includable id='post' var='post'> ​နှင့် <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats --> </div> ​ကြား​ထဲ​မှာ ​ရှိ​တဲ့ ​စာ​သား​တွေ​အ​ကုန်​လုံး​ကို​ဖျက်​ပြီး ​အ​ပေါ်​က ​ပေး​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း ​အ​စား​ထိုး​လိုက်​ရင်​လဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ် ....
(၈) ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ Setting >> Formatting Tab ​ကို​သွား​ပြီး Post-Template ​နေ​ရာ​မှာ ​အောက်​က ​မှင်​နီ​နဲ့ ​ရေး​ထား​တဲ့ ​စာ​သား​လေး​များ​ကို ​ရိုက်​ပါ။
(၉) ​ပြီး​တာ​နဲ့ Save ​လုပ်​ပါ။
​ပို့စ်​တင်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ကို​က ​တစ်​ခု ​သိ​ထား​ရ​မှာ​ရှိ​ပါ​တယ် .
Type your summary here. ​ဟာ ​နိ​ဒါန်း ​တစ်​နည်း​အား​ဖြင့် ​ပို့စ်​တင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​ပြ​ထား​မယ့် ​စာ​အ​နည်း​ငယ်​ပါ ..
Type the rest of your post here. ​က​တော့ ​ကျန်​တဲ့ ​စာ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​ရိုက်​ထည့်​ရ​မှာ​ပါ .. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .